Nezvedu - Sino-Kutonhorera Refidgeation Zvigadzirwa Viwanda Co, Ltd.
Sino-Kutonhorera Refidgeation Zvigadzirwa Viwanda Co, Ltd.
Sino-Kutonhorera Firiji Zvikamu Viwanda Co, Ltd yakagadzika kuita inotungamira mhizha kugadzira uye mutengesi weA / C uye firiji yekusara nezvivakwa.Zvino isu tiri kubata nemhando dzinopfuura mazana matatu ezviuru zvezvigadzirwa.
Zvigadzirwa zvedu zvakasiyana siyana zvinosanganisira compressors, capacitors, contactors, relay, fan motors, condensers, firiji mafuta, firiji gasi, firita yakaoma, kuchaja mavhavha, kuwedzera mavhavha, gasi kuparadzanisa, mafuta paradzimisheni, defrost nguva mitezo, micheka yemhangura, mapaipi emhangura zvakananga, maturusi ekudziya, mabhubhu akacheka, vatema, nezvimwe,
izvo zvinoshandiswa kune HVAC system.Chikonzero chekutonga kwemazuva ano uye kwakasimba bvunzo pamberi pekutumirwa, mhando yedu yezvigadzirwa iri kuita zviri nani uye zvirinani.
Panguva ino, isu tinokwanisa zvakare kupa OEM uye ODM masevhisi. Nekuda kwemutengo wavo wemakwikwi uye mhando yakanaka,
zvigadzirwa zvedu zvaendeswa kunze kwenyika, sekuEurope, Middle East, Africa, uye South America. Kuita zvinodiwa nevatengi vedu ndizvo chinangwa chedu,
uye kuvandudza kuwirirana-kunobatsira bhizinesi kushandira pamwe nevatengi ndiko kutsvaga kwedu. Kana iwe uchinzwa kufarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kuti tiwane rumwe ruzivo.